Wararka - Nidaamka shiidan budada Gypsum
Cunto-siiyaha birqaya ayaa si siman oo isdaba-joog ah u quudinaya dhagaxa weyn ee gypsum si loogu shiido. Budada 'gypsum budada' ka dib markii la shiidiyo waxaa lagu qaadayaa hawo qaadashada afuufa, waxaana lagu kala saaraa kala-soocaha. Budada ku habboon waxay la soo galeysaa qulqulka hawada ee aruuriyaha duufaanka iyada oo loo marayo dhuumaha. Qaadista duufaanka, kala-soocidda iyo ururinta ayaa lagu sameeyaa, ka dibna lagu sii daayaa waalka dheecaanka budada si loo helo budada la dhammeeyay. Qulqulka hawadu wuxuu maraa tuubada soo noqoshada dhamaadka sare ee aruuriyaha duufaanka, ka dibna waxaa loo jiidayaa afuufiyaha. Nidaamka socodka hawada oo dhan ee nidaamka wax shiida waa la xiraa oo la wareegaa, wuxuuna ku dhex wareegaa xaaladaha cadaadiska togan iyo kuwa taban.
Mashiinka, sababo laxiriira biyaha qaar ka mid ah maaddada, kuleylka la abuuray inta lagu jiro shiidi wuxuu keenaa gaaska mashiinka uumi baxa inuu beddelo awoodda socodka hawada, hawada banaanka ahna waa la nuugaa si loo kordhiyo mugga hawo si loogu wareejiyo qulqulka hawada. Sababtaas awgeed, dhuunta haray ee udhaxeysa mashiinka wax dumiya iyo kuwa wax shiida ayaa la hagaajiyaa si loo gaaro isu dheelitirka hawada, gaaska siyaadada ahna waxaa lagu hogaamiyaa shaandhada boorsada, budada wanaagsan ee ay keento hawo hadhaagana waxaa lagu soo qaataa shaandhada bacda, hawada harayna waa la sifeeyaa waana la fasaxaa.
Qaab dhismeed toosan oo leh dhul yar, nidaam madaxbanaan oo dhagaxyada lagu shiido budo;
Wax soo saarka la dhammeeyay waa xitaa ganaax, iyadoo 98% maray;
Aaladda wadista waxay korsataa khaanad jireed oo dhow si ay u yeelato wado xasilloon iyo hawl lagu kalsoonaan karo. Qaybaha muhiimka ah ee shiidku dhamaantood waxay ka samaysan yihiin bir aad u fiican si ay uga dhigto dhagax shiilan, xasilloon oo lagu kalsoonaan karo;
Nidaamka korontada wuxuu korsadaa kontaroolka dhexe si loo helo otomaatik horumarsan, si fududna loogu hagaajiyo mashiinada;
5.Waxaa la barbardhigay 5R Raymond dhagax, isla xaaladdan, awoodda waa la kordhin karaa 10%, xoogga wax shiidaya ee duubku wuxuu kordhin karaa 1500kgf hoosta shaqada guga cadaadiska sare.
Qalabka wax lagu shiido wuxuu qaataa shaabad isku-dhafan oo isku-dhafan si loo helo shaabad wanaagsan.